Mmega ahụ azụ Barbell - Nke kacha mma ị ga -eme | Bezzia
Mgbatị azụ azụ kacha mma
Susana godoy | 12/10/2021 16:00 | Mmega ahụ
N'ihi na enwere ọtụtụ mmega ahụ anyị ga-enwe ike ịhazigharị ahụ anyị wee mara ya. Ma na nke a anyị na -ekwu maka ya mgbatị azụ azụ kacha mma. N'ihi na ọ bụkwa otu n'ime nnukwu ndị enyemaka na -enyere anyị aka na mmegharị ọ bụla, iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Mana ọ bụrụ na ị maghị ebe ị ga -amalite, oge eruola ka anyị were ụfọdụ echiche anyị na -egosi gị buru gị. Cheta nke ahụ ihe kacha mma bụ na ị gbakwunye ụfọdụ ndekọ, mana mgbe niile dabere na mkpa gị wee jiri ntakịrị ihe na -ebu ibu, n'ihi na a ga -enwe oge ịgbakwunye.
1 Barbell nwụrụ anwụ
2 Barbell n'usoro
3 Pịa ubu
4 N'ihu ihu 'n'ihu squat'
5 Ntughari: Otu n'ime mgbatị azụ azụ kacha mma
Barbell nwụrụ anwụ
Ọ bụ otu n'ime isi ihe dị mkpa ma a bịa n'ịme mgbatị azụ kacha mma. Na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime ama ama na nke ahụ bụ na ị nwere ike iji dumbbells. Mana na nke a, a hapụrụ anyị nhọrọ nke mbụ na -akpali anyị ntakịrị. Ma azụ ma ahụ ala na -erite uru maka echiche dị ka nke a. N'ihi na ọ ga -emezi ọnọdụ na mgbakwunye na iwusi azụ ala ike. N'ime mmega ahụ ọ bụla, ị ga -elekwasị anya na iku ume, n'ihi ya, mgbasa ga -akakwa mma. Otu n'ime nnukwu echiche, ọ bụrụ na anyị nwere obi abụọ ọ bụla!
Ọ bụ nnukwu nzọ dị ukwuu na anyị maara na ọ masịrị gị, n'ihi na n'ezie ị nwere ya karịa ihe agbakwunyere bụ ịkwọ ụgbọ ịnyịnya. Site na ọnọdụ ziri ezi na ogbugbu ọ bụla, a ga -ekwurịrị na ị na -arụ ọrụ karịa ka ị chere maka na ọrụ ga -aga site na azụ gaa trapezius ma ọ bụ rhomboids na mpaghara pectoral. Yabụ na anyị na -eche ọrụ zuru oke ma dị mkpa mkpa. N'ezie, ị na -ebute mmanya ahụ nso na pectoral, yabụ ọrụ na -elekwasị anya na latissimus dorsi na trapezius.
Ọ bụ eziokwu na enwere ụzọ dị iche iche esi eme mgbatị ahụ dịka nke a. Mana anyị nwere otu nke kacha dị nfe, n'agbanyeghị na n'ụzọ ezi uche dị na ya ị nwere ike ịga dabara mkpa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka uru ahụ dị na mpaghara a, ị gaghị agbaghara ya. Yabụ na anyị ga -ewebata ya mgbe niile na usoro anyị. Iji mee nke a, ịnwere ike iji dumbbells ma ọ bụ jiri mmanya mee ya wee bulie ha elu malite na mpaghara ubu.
N'ihu ihu 'n'ihu squat'
na squat Ọ na -adị mgbe niile, ka anyị kwuo maka mmega ahụ anyị na -ekwu maka ya, n'ihi na ọ chọrọ imecha ihe kacha mma. A na -akpọ ya dị ka otu n'ime mmemme mmega ahụ bụ isi. Site na ya ị nwere ike ịnụ ụtọ ike karịa na ahụ ala. Ugbu a, naanị ị ga -ewere ọnọdụ kwesịrị ekwesị wee gbaa nzọ na iwusi ahụ dị ala ike kamakwa akụkụ nke ubu na n'ezie azụ, nke bụ ezigbo onye na -akwado taa. Mana site na mmemme ndị a, ị ga -enweta ya n'otu ntabi anya.
Ntughari: Otu n'ime mgbatị azụ azụ kacha mma
Anyị na -ekwu maka ụlọ mmanya mana ọ bụ eziokwu na anyị ekwubeghị otu esi. Yabụ na nkwalite ahụ ga-abụkwa akụkụ dị mkpa nke usoro ọ bụla kwesịrị nnu ya. Dịka ị maara nke ọma, a ga -edobe ụdị osisi a n'ebe dị elu nke mgbidi ma ọ bụ ọnụ ụzọ, maka nkasi obi ka ukwuu. Na mgbakwunye na nwee ike itinye isi Ọ bụkwa eziokwu na ị ga -enweta ume na mmegharị nke ọ bụla ka ị ga -enwetakwu mmepe ahụ mana ọkachasị azụ. Ọ bụ ụzọ zuru oke iji nwee ike ịchịkwa oke ahụ gị. Yabụ maka ihe a niile, ị maralarị na ịkwesighi ịhapụ ha n'akụkụ na ị ga -ewebata ha n'usoro ihe niile bara uru. Ugbu a ị maara mgbatị azụ azụ kacha mma nke ị na -agaghị agbaghara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Mgbatị azụ azụ kacha mma
Kedu ihe bụ microbiota eriri afọ? Ndụmọdụ 3 iji meziwanye ya